မေလအတွင်း မီတာခ ယူနစ် ၁၅၀ ထပ်မံ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ့်အကြောင်းအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
မေလအတွင်း မီတာခ ယူနစ် ၁၅၀ ထပ်မံ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ့်...
26 พ.ค. 2563 - 10:28 น.
(၁) မေလအတွင်း မီတာခ ယူနစ် ၁၅၀ ထပ်မံ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ခုခံကာကွယ်တားဆီးရေးကာလမှာ မေလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဓာတ်အားခ ယူနစ် ၁၅၀ အထိ ကျသင့်ငွေနဲ့ မီတာခ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ကင်းလွတ်လွင့်ပေးမယ်လို့ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက မေလ ၂၅ ရက်နေ့က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ့်အထဲမှာ ပြည်သူတွေ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပြည်တွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ပါဝင်ပြီး သံရုံးတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ မပါဘူးလို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလတုန်းကလည်း လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနဟာ လျှပ်စစ်မီတာခ ယူနစ် ၁၅၀ လျှော့ချပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အိမ်ထောင်စုတချို့မှာ မီတာခတွေ အဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့အပြီးမှာတော့ ဝန်ကြီးဌာနက ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အခု ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့ ပုံစံကတော့ ယူနစ် ၁၅၀ ကို လျှော့ချတာ မဟုတ်ဘဲ ယူနစ ၁၅၀ အတွက် ငွေကျပ် ၁၁၅၅၀ ကို လျှော့ချပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လျှော့ချမှုကို အစတုန်းက မေလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ၁ ယူနစ်ကနေ ၇၅ ယူနစ်အထိ အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့်ပေးမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အခုတော့ မေလ ၁၆ ရက်နေ့ကနေ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ၇၅ ယူနစ် ကင်းလွတ်ခွင့်ထပ်ပေးတာကြောင့် မေလတလလုံးစာအတွက် ယူနစ် ၁၅၀ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ကိုဗစ်-၁၉ ကို ငှက်ဖျားဆေးနဲ့ ကုလို့ရမရ စမ်းသပ်မှု WHO ဆိုင်းငံ့
ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုကွင်းနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတွေကို ကုသမှုမှာ အသက်အန္တရာယ် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေ ပိုများ
ငှက်ဖျားရောဂါ ကုသရာမှာ သုံးတဲ့ ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုကွင်းကို ကိုဗစ်-၁၉ ကုသနိုင်ဖို့ ဆေးဝါးအနေနဲ့ စမ်းသပ်နေတာကို ဆိုင်းငံ့ဖို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုကွင်းဆေးဝါးဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကုသဖို့ရာမှ လုံခြုံစိတ်ချရမှုထက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း အတော်များများမှာ လုပ်နေတဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေအားလုံးကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ မေလ ၂၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တုန်းက လန်းဆက် သုတေသန ဂျာနယ်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆေးဝါးလေ့လာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအရ ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုကွင်းနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတွေကို ကုသမှုမှာ အသက်အန္တရာယ် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေ ပိုများတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့အပြီး WHO ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်ကတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကို တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုကွင်းကို သောက်နေတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒီ ငှက်ဖျားရောဂါဆေးဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိတယ်လို့ သတိပေးနေတဲ့ကြားကပဲ သမ္မတထရမ့်ကတော့ ဒီဆေးကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဖို့ သောက်သုံးကြဖို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်မှုတွေ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ စာရင်းအင်းဌာနက ဝန်ထမ်း ၃ ဦးကို အဂတိနဲ့ အမှုဖွင့်
ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနက မြို့နယ်ဦးစီးမှူး အပါအဝင် ၃ ဦးကို မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ တောင်သူတွေဆီက ငွေကြေးတောင်းခံခဲ့တာကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က မေလ ၂၅ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးရဲထွဋ်အောင်၊ လက်ထောက်ဦးစီးမှူး ဦးနွယ်မင်းသန်း နဲ့ မြေတိုင်းဝန်ထမ်း ဦးသန်းဇော်မင်းတို့ဟာ လယ်ယာမြေ ပုံစံ ၇ ရဖို့အတွက် တိုင်းတာဖော်ထုတ်ရာမှာ ၁ ဧကကို ငွေကျပ် ၁ သောင်းနှုန်းနဲ့ စုစုပေါင်း ၉၂ သိန်း တောင်းခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့် ခုလို အမှုဖွင့် စစ်ဆေးရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
၃ ဦးလုံးကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၆ နဲ့ ရွှေကျင်မြို့မ ရဲစခန်းမှာ မေလ ၂၂ ရက်နေ့က အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒီပုဒ်မဟာ ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်ဆိုရင် အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ထောင် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တဲ့ ပုဒ်မလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၂ ရက်နေ့တုန်းကလည်း ပဲခူးတိုင်း၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ လက်စွပ်ကျေးရွာက အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအေးကိုကို ကို အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဆီက ငွေကြေးနဲ့ အုတ်တွေကို ရာထူးတာဝန်အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး တံစိုးလက်ဆောင်အဖြစ် ယူခဲ့လို့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးပုဒ်မ ၅၆ နဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
(၄) ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ပရောက်သူတွေ မဲပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ကော်မရှင် ထုတ်ပြန်
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးတစ်ခုတည်းမှာဘဲ မဲပေးနေရတာထက် မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုရှိတဲ့ နီးစပ်ရာ သံအရာရှိရုံးတွေမှာလည်း မဲပေးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင့် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတုန်းက နိုင်ငံပေါင်းစုံကို ရောက်နေတဲ့ ပြည်ပရောက ်မဲပေးသူဦးရေက နှစ်သောင်းကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ထိုင်းကို ရောက်နေသူတွေထဲက လူ ၆၀၀ ကျော်ပဲ မဲပေးခဲ့တယ်လို့ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အချက်အလက်တွေအရဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် လတ်မှတ်ရထားသူ အရေအတွက်က သန်းနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ကော်မရှင်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ပြောထားပေမယ့် ဘယ်နေ့ လုပ်မလဲဆိုတဲ့ ရက် အတိအကျ ကိုတော့ ထုတ်မပြောသေးပါဘူး။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက် မဲပေးနိုင်ဖို့ အချက်အလက်တွေ ထည့်သွင်းဖြည့်ရမယ့် ပုံစံ ၁၅ တွေကို ပို့ထားပြီး ရှိမရှိကိုလည်း ဖြေကြားပေးတာ မရှိသေးပါဘူး။
ပုံစံ ၁၅ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲရက်အတိအကျ မထုတ်ပြန်ခင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေက ပေးပို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကျင်းပဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရည်မှန်းထားပြီး အဲဒီမတိုင်မီ ၄ လ အလိုမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့် ရက်အတိအကျကို ထုန်ပြန်ပေးမယ်လို့တော့ ဦးမြင့်နိုင်က ပြောထားသလို၊ အခြားကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အချို့ကလည်း ဘီဘီစီကို အတည်ပြု ပြောထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မေလအတွင်း မီတာခ ယူနစ် ၁၅၀ ထပ်မံ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ့်အကြောင်းအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ